सानिमा समूहलाई माथिल्लो तमोरको उत्पादन अनुमतिपत्र - UrjaKhabar Urja Khabar - Nepal's No. 1 energy based online portal.
सानिमा समूहलाई माथिल्लो तमोरको उत्पादन अनुमतिपत्र
जेठ २७, २०७५ 4501 ऊर्जा खबर/काठमाडौं
सरकारले सानिमा हाइड्रो समूहलाई २ सय ८५ मेगावाटको माथिल्लो तमोर जलविद्युत आयोजनाको उत्पादन अनुमतिपत्र दिएको छ । विद्युत विकास विभागको सिफारिसमा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाई मन्त्रालयका सचिव अनुपकुमार उपाध्यायले अनुमतिपत्र स्वीकृत गरेका हुन् ।
ताप्लेजुङमा निर्माण हुने आयोजनाको उत्पादन अनुमतिपत्र लिन सानिमा समूहले ४ सय १५ मेगावाटका लागि २०६८ मंसिर २९ गते विभागमा आवेदन दिएको थियो । पछि क्षमता घटाएर २ सय ८५ मेगावाटका लागि अावेदन दिएकाे थियाे । १ सय मेगावाटभन्दा माथिका आयोजनाको अनुमतिपत्र विभागको सिफारिसमा सचिवले स्वीकृत गर्ने प्रावधान छ । आयोजना अघि बढाउन तमोर सानिमा इनर्जी कम्पनी स्थापना गरिएको छ ।
कम्पनीले अहिले नेपाल विद्युत प्राधिकरणमा विद्युत खरिद सम्झौता (पिपिए) गर्न आवेदन दिएको छ । प्राधिकरणसँग पिपिए भएपछि आयोजना निर्माण प्रक्रिया अघि बढ्ने सानिमा समूहका सुवर्णदास श्रेष्ठले बताए । उनका अनुसार पिपिएपछि विभिन्न बैंक तथा वित्तीय संस्थासँग ऋण लगानी सम्झौता गरेर आयोजनाको निर्माण थालिनेछ । स्वदशी लगानीमा निर्माण हुने आयोजना पूरा गर्न ५५ कराेड अमेरिकी डलर (करिब ५९ अर्ब ४० करोड रुपैयाँ) लाग्ने अनुमान गरिएको छ ।